Raac sida ugufiican ee Giro d'Italia oo lasocda codsiga rasmiga ah | Wararka IPhone
Haddii aad tahay qof jecel baaskiil wadista, waqti fiican ayaad ku heli lahayd guga xilligan fasallada, laakiin imaatinka bisha Maajo muddada safaradu waaweyni bilaabmi doonaan, taas oo macnaheedu yahay in peloton uu haddaba ku raaxeysanayo tartanka Giro d'Italia. Dhinaca kale, taageerayaasha baaskiil wadista ayaa hadda helaya daabacaadda 2017 ee codsiga rasmiga ah ee tartanka Talyaaniga.
Malaha soojiidashada weyn ee arjiga loogu talagalay inta badan isticmaalayaasha noqo suurtogalnimada inaad raacdo tartanka tooska uga socda iPhone-ka. Dabagalku wuxuu ku dhow yahay dhammaystirka maaddaama ay muuqaal ahaan soo jiidasho leedahay, wuxuu na tusayaa tweets xiiso leh waqtiga dhabta ah sidoo kale wuxuu leeyahay faallooyin daqiiqad-daqiiqad ah oo Isbaanish ah. Wax yar ayaa jira oo la weydiisan karo arrintan.
Maaddaama aan la soconno heerarka, waa in sidoo kale la ogaadaa in barnaamijku uu ku habboon yahay in lagu ogaado waxa naga horreeya tartanka Talyaaniga. Marxalad kastaa waxay leedahay sharraxaad dheer oo qoraal ah oo si dhammaystiran naloogu sharraxay iyada oo xogta farsamada sida altimetry, planimetry ama astaanta qaybaha ugu muhiimsan la bixiyay. Dabcan, sida cilladaha ugu weyn, waa in la ogaadaa inay xiiso laheyd inay ka muuqato liiska dhammaan heerarka nooca mid kasta (fidsan, buur, waqti tijaabin, iwm).
Sida for natiijooyinka iyo darajooyinkaSida iska cad, dalabku wuxuu leeyahay qayb aan kala tashan karno wax kasta oo khuseeya maaliyadaha kala duwan ee abaalmarinta baaskiilayaasha ugu fiican wareega Talyaaniga.
Qaybta Sawir iyo muuqaal, sidii sanadihii hore, waa ku filan tahay. Waxaan ku haynaa fiidiyowyadeenna qashin-qubka ah ee heerarka leh kuwa ugu muhiimsan, sawirrada iyo sidoo kale dabcan qayb aan ka heli karno xogta ugu habboon ee kooxaha ka qaybgalaya tartanka, iyo sidoo kale orodyahannada.
Dhinaca kale, barnaamijka waxaa ku jira qaybta "Wajiyadda leexashada", oo aan kari karno sawir iska qaad ah leh iPhone-ka oo codso miirayaal kala duwan si aad hadhow ula wadaagto xiisaha aan u qabno tartanka casaanka ee shabakadaha bulshada. Wali waa xiisaha, laakiin dabcan waa la soo dhaweynayaa.
Marka la soo koobo, waxaan wajaheynaa a codsiga bilaashka ah gebi ahaanba lagama maarmaan u ah dhammaanteen kuwa jecel baaskiil iyo dalxiisyada waaweyn. Suurtagalnimada in si toos ah loola socdo, xogta farsamada iyo sharraxaadda marxalad kasta waxay si fiican u caddeyn kartaa megabytes xusuusta oo aan ku fadhiisan doonno barta Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Raac sida ugufiican ee Giro d'Italia adigoo adeegsanaya codsiga rasmiga ah
Evolus 3, saldhig weyn oo ku amraya dhammaan qalabkaaga